राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको के हो र कहिले बाट शुरू भयो ?
मंगलबार, कार्तिक ९, २०७८ ०५:२५:५५ युनिकोड
जानू भयो तपाईलाई पायक पर्ने केन्द्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन?
शुक्रवार, आश्विन २२, २०७८ जगिलाल थापा
नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्रको कमिकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उदेश्यले नेपाली नागरीकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको हो । अन्तराट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बाहकको दश औठाछाप अंकित व्यक्तिको पहिचान समेटिन्छ । चिप सहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने यसमा बैयक्तिक र जैविक विवरण समेत समेटिने छ ।
एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता,लाइसेन्स,फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र र जग्गाधनी पुर्जा जस्ता सामग्री बोकेर हिड्ने झण्झट हुँदैन । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्यु सम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ । राष्ट्रि परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार कुनैपनि व्यक्तिको जन्मदेखि नै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाईका अनलाइन सिष्टममा लगेर व्यवस्थित गरिने छ।
एक जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर कहिल्यै दोहोरिँदैन । परिचय पत्रको विवरण अनलाइनमा व्यवस्थित गरिए पश्चात बाल बालिकाको जन्म दर्तामा दिइएको नम्वर नै उस्को स्थायी परिचय पत्र नम्वर हुन्छ । र उसले प्राप्त गर्ने सबैखाले सुबिधा सोहि नम्बरमा समाबेश हुन्छन । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण जो कोहिले पढ्न सक्दैन त्यहाँ समेटिएको विवरण हेर्न छुट्टै रिडर मेसिनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
विकास र समृद्धिको मुद्धालाई मूर्त रुप दिन सरकारले आफ्ना सबै अंगलाई चुस्त वनाउदै प्रविधी मैत्री वातावरण तयार गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको ब्यबस्था गरिएको हो ।
कहिले बाट शुरू भयो ?
राष्‍ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई प्रकृयागत रुपमा अघि बढाउन “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” , “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्‍त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५”, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयहरुलाई आधार लिईंदै आइएकोमा मिति २०७६।१०।२८ मा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि यसको लागि कानूनी आधार निर्माण भएको छ । मसिर तीन गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका ४ शान्तिपुरकी १ सय १ वर्षीय भगवतीदेवी भण्डारीलाई गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो पटक परिचयपत्र प्रदान गरी यस कार्यको शुभारम्भ भएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन के के लिएर जानु पर्छ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जादा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने केन्द्रस्थलमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपी , बाहिरी जिल्लामा नागरिकता बनेको भए बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, जन्ममिति नखुलेको नागरिकताको हकमा जन्ममिति खुलेको प्रमाण, बिबाहित महिला जसको माइतबाट नागरिकता बनेको हकमा बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र लिएर जानु पर्ने छ।
सरकारको प्राथमिकता भित्र परेको यस कार्यक्रम, आ.व. २०७७/०७८ मा राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको लागि १ करोड नागरिकको विवरण संकलन लक्ष्य लिइएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जादा लिएर जानु पर्ने आवस्यक कागजातहरु
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन २२, २०७८, ०७:०७:००